Palmitoylethanolamide (PEA) muchidimbu Pane zvakataurwa kuti Kudya neDrug Administration yakabvumidza kuendesa chikumbiro chekuyedzwa kwekiriniki yekurapa COVID-19 nekushandisa mushonga wekugadzira unotevedzera zvinoitwa nemorekuru rinowanikwa mumumbanje. Iyo yekugadzira mishonga, inonzi ultramicronized palmitoylethanolamide (micro PEA), inofungidzirwa kuti inoshanda seanorwisa-kupisa. Palmitoylethanolamide (PEA) iri "yakasikwa ...
Wakafa wakatarisana nekukwegura here? Huye, mushonga wekupokana-kukwegura pasina mubvunzo ndiyo yakavimbika sarudzo yekudzosera yako wachi yekubereka. Tarisa uone akakosha maficha eNicotinamide Mononucleotide (NMN), basa rayo musenesi, uye maitiro ekurapa. Phcoker inyanzvi yekugadzira kuburitsa Nicotinamide mononucleotide (NMN) poda Kurumidza kutumira kubvunza: Taura nesu Nhanganyaya Kukura o ...
Nei tichida Magnesium? Tisati tanyatsoongorora Magnesium L-Threonate nootropic yekuwedzera, ungangoda kunzwisisa nezve yakakosha yakatangira. Magnesium chinhu chakakosha micronutrient, iyo iri kushingairira kubatanidzwa mune akati wandei maitiro emuviri. Iyo elementi inobata pamusoro pemhasuru contraction uye zororo, protein synthesis, uye neuronal mashandiro. Kunze kwezvo, inodzora shuga yeropa uye inochengetedza kutsikirira kweropa ...
Galantamine Hydrobromide pfupisoGalantamine hydrobromide mushonga wekurapa unoshandiswa kurapa kuora mwoyo kwechirwere cheAlzheimer. Galantamine yakatanga kubviswa kubva kune yechando simiti chirimwa Galantus spp. Iyo galantamine yekuwedzera asi zvakadaro alkaloid yepamusoro iyo inogadzirwa nemakemikari. Kunyangwe honzeri yechirwere cheAlzheimer isina kunyatsonzwisiswa, zvinozivikanwa kuti vanhu vanotambura neAlzheimer's h ...
PRL-8-53 muchidimbu Hype yePRL-8-53 se psychoactive mushonga unoteedzera kumashure mukutanga kwema1970. Nikolaus Hansl, purofesa paCreighton University, zvakangoitikawo kuti akawana nootropic paanenge achishanda paaminoethyl meta benzoic acid esters. Kubva payakatanga, ichi chekuwedzera chave chidzidzo chimwe chete uye kutongwa kwevanhu. Kuongororwa kwekiriniki kwaive humbowo hwekupedzisira hwekuti PRL-8-53 yekudzidza ...
Cycloastragenol Ongororo Cycloastragenol (CAG) inozivikanwawo sekuti T-65 ndeye yakasikwa tetracyclic triterpenoid yakawanikwa kubva kuiyo Astragalus membranaceus chirimwa. Yakatanga kuwanikwa apo Astragalus membranaceus dhizaini yaive ichiongororwa nezve ayo anoshanda zvinoshandiswa zvine anti-kukwegura zvivakwa Cycloastragenol inogona zvakare kutorwa kubva kuAstragaloside IV kuburikidza nehydrolysis chiito. Astragaloside IV ndiyo inonyanya kushanda ing ...
Nicotinamide riboside (NR) uye nicotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride chimiro chakakwenenzverwa che nicotinamide riboside (NR). 1 Chii chinonzi Nicotinamide Riboside (NR)? NR chimiro chevhitamini B3 kana niacin. Iyo komputa yakawanikwa muma1940s sechinhu chekukura kweHH influenza. Pakutanga kwezana ramakumi maviri nemasere, zvidzidzo zvakawanda zvaizoratidza kuti NR inotungamira yeNAD +. Ini ...
Chii chinonzi Oxiracetam? Oxiracetam ndeimwe yekare nootropic inowedzera kubva kumhuri ye racetam. Yaive yechitatu racetam komponi mushure me piracetam uye aniracetam uye yakatanga kugadzirwa muma1970. Oxiracetam inogadzirwa nemakemikari eiyo yekutanga racetam, piracetam. Kufanana nemamwe maracetams, oxiracetam ine pyrrolidone pamucheto wayo. Nekudaro, oxiracetam ine hydroxyl boka, ndosaka iri yakawanda poten ...
Chii chinonzi 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) inozivikanwawo se9-MBC inoverengeka nootropic komputa kubva kune β-carboline boka. Iyo β-Carbolines inobva kumhuri yakasarudzika carboline. Izvi zvinoreva kuti zvinogadzirwa zviri zviviri zvisingagumi mumuviri wemunhu uye zvekare mune mimwe michero, nyama yakabikwa, utsi hwefodya nekofi. Iyo β-Carbolines (BCs) inozivikanwa seanurotoxic, zvisinei, yaive ichangobva di ...